रामचन्द्र पौडेल शुक्रबार, चैत १४, २०७६, ०७:०९
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइसरको संक्रमण रोक्नका लागि सरकारले लकडाउन आह्वान गरेको छ। यो नेपालको स्वास्थ्यका लागि, संक्रमणबाट जोगिनका लागि अपनाएको हो, लकडाउन।
यसले आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने छ। सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यसको प्रभाव देखिनेछ। स्वास्थ्यको क्षेत्रका चुनौती पनि आइलागेको छ।
खासगरी चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षाको विषय नागरिकको सुरक्षासँगै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। स्वास्थ्यकर्मीले उपचारमा संलग्न हुँदा सुरक्षा कवच लगाउनुपर्ने छ। स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक पीपीईको कमी देखिएको छ।
हाम्रो देशमा संक्रमण देखिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्य क्षेत्र सुरक्षित हुन आवश्यक छ। अस्पताल, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी पहिले सुरक्षित हुन आवश्यक छ। आइसोलेसन वार्ड, आइसियू बढी भन्दा बढी आवश्यक छ। यसका लागि अहिले पीपीईको कमी भएको सुनिँदै छ।
सरकारले चीन लगायतका देशबाट पीपीई ल्याउन लागेको पनि जानकारी आएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षाको व्यावस्थामा सरकार सबैभन्दा पहिले ध्यान दिन जरुरी छ।
आज लकडाउनको अवस्थामा मुलुक छ। अहिले कोरोनाको आंतक छ। यो आंतक मेची-महाकालीको सीमामा मात्र सोचेर हुनेवाला छैन। यो समस्या विश्वको समस्या भएको छ। नेपाली भएर मात्र सोच्ने हो भने पनि नेपाली विश्वमा छरिएर बसेका छन। हामीले ती सबै नेपालीको सुरक्षाका बारेमा सोच्नुपरेको छ। विदेशमा रहेका ४०-५० लाख जनताको अवस्थाका बारेमा खोजी गर्नुपर्छ।
आधुनिक राज्य भनेको मुलुकसँग जोडिएका सबैलाई हेर्ने हो। कल्याणकारी राज्य भनेको नै यही हो। विदेशमा रहेर रेमिट्यान्समार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने नागरिकका बारेमा पनि लोककल्याणकारी राज्यले तत्काल सोच्नपर्छ।
नेपालको आर्थिक अवस्थाका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अहिले काम गरेर खाने मान्छेका लागि न काम न मामको अवस्था सृजना भएको छ। काम गरेर खाने मान्छेका लागि जीविकोपार्जनका बारेमा पनि हामीले अहिले देखि नै सोच्न जरुरी छ।
भारतमा ८० करोड जनतालाई सितैमा खान दिनका लागि राहत घोषणा गरेको छ। भारतले जनतालाई बचाउनका लागि ठूलो राहत घोषणा गरेको छ। हामीले पनि हाम्रा जनतालाई बचाउनका लागि राहतका प्याकेज ल्याउन जरुरी छ। सरकारले औपचारिकभन्दा पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका बारेमा सोच्न जरुरी छ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक जसको न कार्यालय, न नियम छ। बिहान काम गर्ने र बेलुका खाने नागरिकका लागि सरकारले तत्काल सोच्न जरुरी छ। म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहान्छु। सरकार चाहिने भनेको अहिले नै हो।
सरकारलाई आग्रह गर्न चाहान्छु, यस्तो बेलामा आम सहमति जुटाएर नागरिकका समस्या समाधान गरिनुपर्छ। यस्तो बेलामा आम सहमति आवश्यक हुन्छ। जसका कारणले सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या नहोस्। यस्तो बेलामा आवश्यक पर्‍यो भने
सहमतिको सरकार पनि बनाउन सक्नुपर्छ। दुनियाँमा यस्तो प्रचलन पनि छ।
आर्थिक क्षेत्रमा अझ ठूलो समस्या आउँदै छ। हाम्रो भोलिको आर्थिक अवस्था के हुने हो? अब हाम्रा विकासका योजनाहरु के हुने हुन्? लकडाउनको अवस्था के हुने हो? एकसाताको लकडाउनले संक्रमण नियन्त्रण हुन सक्छ कि सक्दैन्? भारतले २१ दिनको लकडाउनको घोषणा गरेको छ, हामीले त्यो अवस्था हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो पनि सरकारले विश्लेषण गर्नुपर्छ।
मुलुकको भावी अर्थतन्त्रका लागि मित्र मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध कस्तो रहने, मित्र मुलुकहरुमा पनि संकट छ। ती मुलुकहरुले हामीलाई कस्तो सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने पनि सोच्न जरुरी छ।
अहिलेको संक्रमणले मानव सभ्यतामाथि नै प्रहार गरेको छ। यो महामारीले दुनियाँलाई कस्तो क्षति पुर्‍याउने हो। अबको मानव सभ्यता पनि कस्तो हुने हो। त्यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ।
यो महामारीका कारण वर्तमान कस्तो हुने हो र भविष्य कस्तो हुने हो, वुद्धिजीवीहरुले पनि अहिले विश्लेषण गर्न जरुरी छ। आजको आवश्यकता भनेको वर्तमान जोगाउँदै भविष्यको निक्र्यौल गर्ने हो। अहिले सरकारले जिम्मेवारीबोध गरोस्।
राजनीतिक दलहरु सामाजिक संस्था वुद्धिजीवी तथा दाताहरुले कस्तो सहयोग गर्ने हो। सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। लकडाउन छ। तर मुलुक जोगाउनका लागि घर घरमा बसेर चिन्तन गर्न आवश्यक छ। सरकारले विपन्न नेपालीका लागि तत्काल राहतको घोषणा गरोस्।
(पौडेलले बिहीबार साँझ फेसबुकमार्फत गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)